Gilliin qamaa nafa binensota bishaan-kessa bayee kessatti argamu dha. Kuniis qamaa afurra yoo ta'uu, fayyidaan isaas oxygenaa bishaan irraa gargari basuu fi carbon dioxide bishaaniti gadii lakkisu dha. Qamnii gill microsopic (yoo qamni isaa dhi'atee ilalamu) qamaa ballina (SA) guddaa qabate jiruu yoo ta'uu kuniis waantotaa isaa marsaani argamaniin akka wal-qunnamu isaa gargara.
Binensotii bishaan kessa bayee xixiqoon (microscopic) fi kan guggudo ta'anii inactive ta'aan, oxygeen barbachisaa ta'ee qamaa isanii hundaan fudhachu ni danda'an, kanaaf, gill osoo hin fayyadamiin afuraa fudhachuu ni danda'uu. Haa ta'uu malee, binensotii bishaan kessaa xaxama (complex) ta'aan fi kan active ta'aan gill tokko yokaan tokko olii ta'ee ni barbaduu.
Gillonni yeroo bayee tishu, damee (branch) yokaan slender tufted geggefama (anatomy) xixxiqo ta'aan ofii kessa qabu. Gilli tittolle bishaa kessaa alaa, gillonni biraa dhigaa yokan jigaa (liquid) coelomic ofii kessa qabu, kuniis karaa gaziin itti dadarbuun. Oxyginiin dhigaan fa'amee garaa qamotaa birratti geggefama. Carbon dioxidiin immo dhigaa kessa gara tishuu gillii qalla kessa darbee gara bishanii harcafama.
Gillonii fi qamonii akka gilli jiraan, qamaa binensotta bishaan kessat bakka garagarat argamu. Binensonni kunis mollusks, crustacean, tittota bishaani, Qurxummii fi amfibianotta.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Gill&oldid=22343" irraa kan fudhatame
Last edited on 7 Bitootessa 2013, at 18:36
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 7 Bitootessa 2013, sa'aa 18:36 irratti.